OMH: ampy tsara ny famatsian-tsolika | NewsMada
OMH: ampy tsara ny famatsian-tsolika
Tsaho ! Nandeha ny feo tany anaty tambajotra sosialy, fa tsy ampy ny famatsiana solika eto an-dRenivohitra, ny faran’ny herinandro teo. Manoloana izany, nanamafy ny tale jeneralin’ny Ofisy malagasy misahana ny vokatra ara –tsolika (OMH), Rajaonarivelo Laurent, fa « tsy mitombina velively izany, ary tena ampy tsara ny famatsiana sy ny tahirin-tsolika eto amintsika, ka anisan’izany ny eto an- dRenivohitra ».
Nohazavainy, fa mety nisy tokoa ny taitra nahafantatra izany feo niely izany, ka nirohotra nividy solika nihoatra ny fatra fanaony mazahatra. Nomarihiny koa fa nisy fahatarany herinandro ny sambo mpamatsy solika avy any ivelany, satria tokony ho tonga eto Madagasikara, ny 17 oktobra teo, saingy amin’ny 25 oktobra vao higadona any Toamasina. Na izany aza, nohamafisiny fa « tsy misy fiantraikany amin’ny famatsiana eto Madagasikara izany », satria ampy tsara ny tahiry any amin’ny toby fitahirizana.
Mazava ho azy, misy fiantraikany any amin’ny tahirin’ireo toby mpaninjara solika izany, ka mety nisy lany ny tahiriny. Isan’andro anefa izy ireny no vatsina solika, ka izay no nahatonga ny feo vao mainka niitatra.